फर्नीचर - प्रेरणा - हामी एक केटा को लागी एक बच्चाहरु को कोठा सुसज्जित
हामी केटाको लागि बच्चाहरूको कोठाको व्यवस्था गर्दैछौं
अगस्त २,, २०१। फेब्रुअरी १,, २०२१ व्यवस्थापक केटाहरूको कोठा, बच्चाहरूको कोठा
केटा को लागी बच्चाहरु को कोठा को आफ्नै विशिष्ट वातावरण छ। के तपाइँको बच्चा हरेक साहसिक को बारे मा उत्साहित छ? वा एक सानो शोधकर्ता नर्सरी मा बढ्दै छ? यदि तपाइँ आफ्नो छोरा को चासो को बारे मा एक सानो सोच्नुहुन्छ, उसको कोठा आरामदायक बनाउन निश्चित हुनुहोस्। आउनुहोस् हामी हेरिरहेका केहि विवरणहरू हेरौं।
केटाको कोठा को पर्खाल को रंग
यदि तपाइँको छोरा एक मनपर्ने रंग छ, कोठा को पर्खालहरु को रंग छनौट गर्दा यसको बारे मा सोच्न को लागी निश्चित हुनुहोस्। जे होस्, तपाइँ यसको साथ पूरै कोठा को रंग गर्न को लागी छैन। तीन पर्खालहरु मा तटस्थ रंग छनौट र चयनित रंग संग मात्र एक रंग को लागी स्वतन्त्र महसुस गर्नुहोस्। यस तरिका, फर्नीचर र चयनित सामानहरु धेरै राम्रो बाहिर खडा। वालपेपर वा भित्ता स्टिकर पनि पर्खाल सजावट को लागी एक उपयुक्त समाधान हो। यदि तपाइँको छोरा को कलात्मक झुकाव छ, तपाइँ पनी कोठा को एक विशेष रंग संग चित्र बनाउन सक्नुहुन्छ जसमा उहाँ कोर्न सक्नुहुन्छ।
केटाको लागि बच्चाहरूको कोठामा भुइँ
हरेक बच्चा भुइँमा खेल्दै आफ्नो धेरै समय बिताउँछन्। तेसैले, यस तथ्यलाई ध्यानमा राख्नुहोस् जब भुइँको सही प्रकार छनौट गर्नुहोस्। भुइँमा एउटा गलीचा राख्नुहोस्। जब बच्चाहरू छिटो हुर्कन्छन्, टुक्रा रग राम्रो हुन्छ। साना केटाहरु को लागी, जनावरहरु वा पथ संग रूपांकनहरु छनौट गर्नुहोस्। ठुलो, फरक रंगीन ढाँचाहरु को लागी।
केटाको कोठामा फर्नीचर
एक केटा को लागी एक बच्चाहरु को कोठा मा फर्नीचर धेरै ठाउँ लिनु हुँदैन। केटाहरुलाई ठाउँ चाहिन्छ। तपाइँ व्यक्तिगत टुक्रा व्यक्तिगत छनौट गर्न सक्नुहुन्छ वा एक फर्नीचर सेट किन्न सक्नुहुन्छ। केहि एकाइहरु संग एक ओछ्यान छ। जब फर्नीचर छनौट, मन मा खिलौने र चीजहरु को लागी चित्र र सिक्ने को लागी ठाउँ को लागी भण्डारण ठाउँ मा राख्नुहोस्।
र सामान को बारे मा के?
सहायक केटाको कोठा जीवित हुनेछ। लोकप्रिय सीट झोला वा झुण्ड्याउने कुर्सीहरु छन्। यदि कोठा को आकार अनुमति दिन्छ, एक बच्चाहरु को पाल वा tipee जोड्नुहोस्। तपाइँ पर्खालहरुमा बिभिन्न आकार को शेल्फ राख्न सक्नुहुन्छ। कपडा आयोजक वा खेलौना भण्डारण बक्स उपकरण को लागी एक उपयुक्त सहायक हो।
फर्नीचर प्रदान गर्नुहोस् बच्चाहरु को कोठा मा तपाइँ यहाँ पाउन सक्नुहुन्छ।
तपाईको डेस्कमा आरामदायी बसिरहेको
के तपाइँ सेतो भान्छा मनपर्छ? हामी तपाईंलाई सल्लाह दिन्छौं!